Ebba Busch oo diyaar u ah hogaaminta xisbiga KD - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Ebba Busch Thor maanta waa xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka Upsala. Foto: Henrik Montgomery/TT.
Ebba Busch oo diyaar u ah hogaaminta xisbiga KD
Busch: diyaar in aan hogaamiyo xisbiga Kistdemokraterna
La daabacay fredag 13 februari 2015 kl 14.36
Xisbiga baarlamaanka Sweden ugu yar kristdemokraterna ayaa dhawaan dooran doona hogaamiye, ka dib markii dhowr todobaad muddo laga joogo uu ku dhawaaqay hogaaminta xisbiga ka dagaya hogaamiyaha hadda xilka sii haya Göran Hägglund.
Saddex musharaxiin oo dhamaantood haween yahiin ayaa imminka xilkas u tartamaya. Waxayna kalo yahiin Ebba Busch Thor oo imminka ah xildhibaanad ka tirsan golaha deegaanka Uppsala, iyo Acko Ankarberg Johansson oo maanta xoghayaha xisbiga, iyo weliba xildhibaanad baarlamaanka ka tirsan oo magaceeda yahay Penilla Gunther. Ebba Busch Thor ayaa iyada cadaysay musharaxnimadeeda.
– waxan diyaar u ahay in aan horumood u noqdo dib u cusboonayn ka jawaabi karta culeyska maanta bulshada heysta, annag oo ka duuleysna oo masuuliyad iska saarayna dadka dhiban iyo sidii qof weliba xaq ugu yeelan lahaa madaxbanaani. Waa dib u cusbooneyn uu billabay Göran Hägglund, waxaana qabaa in aan ahey ruuxii halkeeda ka sii wadi lahaa, ayey Ebba Busch thor.
Dhamaadkii bishii Januari ayey aheyd markii Göran Hägglund ku dhawaaqay in uu iskaga degayo xilka hogaaminta xisbiga Kristdemokraterna. Bisha Abriil oo xisbiga qabanayo kulan dheerad ah ayaa la doonaya in lagu doorta qofkii badeli lahaa.
Xoghayaha Acko Ankarberg ayaa iyada horay u cadaysay in ay xiisaynayso qabashada hogaaminta xisbiga Kristdemokraterna. Sidoo kale Ebba Busch Thor ayaa iyadana imminka cadaysay in ay danaynayso iyadana xilkan. Waxaana la filayaa in ay ahaan doonta labadaan dumar midkeed in ay ku soo abxi doonto doorashada loo 1qabanayo hogaaminta xisbigan. Sida laanta ekot oogatay ma jira oo saddexeeya oo haysta taageero sidaas u badan oo uu ku hanan karo xilka hogaaminta xisbiga. Ebba Buscha ayaa iyada magaacaabista iyo kalsoonida inta laamaha xisbiga ee dalka.
Waa arrin aad wanaagsan marka ay dadka ka dhawaajiyaan kalsoonida iyo taageerada ay kuu hayaan, taas ayaa u sabab ah in aan isku taago masharaxnimada hogaaminta xisbiga, ayey tiri Ebba Busch Thor.
Ebba Busch Thor waa 28 sanno jir oo imminka ah xildhibaanad ka tirsan golaha deegaanka magaalada Uppsala. Laakiin inkastoo da’deeda yartahay haddana waa ruux leh waayo aragnimo durugsan oo siyaasadeed. Horey waxay u soo noqotay guddoomiyaha dhallinyrada Kristdemokraterna. Sannadkii 2010kii ay ka mid noqotay golaha deeganka Upsala. Sannadkii 2010kiina waxay taageero siisay nin yiraahdo Mats Odell ka dib markii uu ku qabsaday hogaaminta xisbiga Göran Hägglund. Hddana Ebba Bush waxay diyaar u tahay halgan cusub.
– Waxaan qabaa annigoo ka duulaya waayo aranimadayda durugsan iyo shaqooyinka adag ee saiyaadeed ee aan soo qabtay, annigoo weliba ah ruux warkiisa cadyahay oo cod kar ah, in aan ku soo saa’idin karo firfircooni xisbiga u baahan yahay si loo mideeyo garabyada xisbiga oo an horey ugu socono, ayey tiri Ebba Busch Thor.